Nehemia 5 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
5 Na mmarima no ne wɔn yerenom dii abooboo kɛse+ hyɛɛ wɔn nuanom Yudafo no.+ 2 Ɛnna ebinom kae sɛ: “Yɛde yɛn mmabarima ne yɛn mmabea resi awowa na ama yɛanya aduan adi atena ase.”+ 3 Ebinom nso kae sɛ: “Yɛde yɛn mfuw ne yɛn bobe nturo ne yɛn afie resi awowa+ na ama yɛanya aduan wɔ ɔkɔm bere mu.” 4 Ɛnna afoforo nso kae sɛ: “Yɛabɔ bosea wɔ yɛn mfuw ne yɛn bobe nturo+ ho de atua ɔhene tow.+ 5 Yɛn honam te sɛ yɛn nuanom honam,+ na yɛn mmabarima te sɛ wɔn mmabarima. Nanso yɛreyɛ abrɛ yɛn mmabarima ne yɛn mmabea ase ayɛ nkoa,+ na yɛn mmabea no mu bi mpo de, yɛabrɛ wɔn ase dedaw; na yenni tumi biara, efisɛ yɛn mfuw ne yɛn bobe nturo akodi ebinom nsam.” 6 Bere a metee asɛm yi ne wɔn abooboo no, me bo fuwii yiye. 7 Enti misusuw ho wɔ me komam, na m’ani annye+ nea atitiriw ne asoafo no ayɛ no ho, na meka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Apoo+ na morebɔ mo nuanom yi.” Ɛnna wɔn nti mema wɔbɔɔ gua kɛse.+ 8 Na meka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Yɛn na yegyee yɛn nuanom Yudafo a wɔtɔn wɔn maa amanaman no san de wɔn bae+ sɛnea yɛn ahoɔden betumi; moresan atɔn mo ankasa mo nuanom+ anaa, na yɛnsan ntɔ wɔn bio?” Mekaa saa no, wɔyɛɛ komm na wɔantumi anka hwee.+ 9 Ɛnna meka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ade a moreyɛ yi nye.+ Ɛnyɛ yɛn Nyankopɔn+ suro+ mu mmom na ɛsɛ sɛ monantew, na amanaman a wɔtan yɛn+ no ammɔ yɛn ahohora?+ 10 Me nso me ne me nuanom ne m’asomfo de sika ne aduan fɛm wɔn. Mesrɛ mo, momma yennyae mfɛntom+ no gye. 11 Enti mfɛntom a mugye wɔ wɔn mfuw+ ne wɔn bobe nturo ne wɔn ngodua mfuw ne wɔn afie ho ne nkyem ɔha a mugye wɔ sika ne aduan ne nsa foforo ne ngo so no, mesrɛ mo, monsan mfa mma wɔn nnɛ da yi ara.” 12 Ɛnna wɔkae sɛ: “Yɛbɛsan de ama wɔn,+ na yɛremmisa hwee mfi wɔn hɔ.+ Yɛbɛyɛ nea woaka no pɛpɛɛpɛ.”+ Enti mefrɛɛ asɔfo no na mema wɔkekaa ntam sɛ wobedi asɛm yi so.+ 13 Ɛno akyi no, meporoporow me kokom na mekae sɛ: “Obiara a ɔrenni asɛm yi so no, saa ara na nokware Nyankopɔn no mporow no mfi ne fie ne n’agyapade mu; saa kwan no so na wɔmporow no mma biribiara mmɔ no.” Na asafo no nyinaa gyee so sɛ: “Amen!”+ Na woyii Yehowa ayɛ.+ Na ɔman no dii asɛm yi so.+ 14 Ade biako nso ni: Efi da a ɔhene yɛɛ me wɔn amrado+ wɔ Yuda asase so, Ɔhene Artasasta+ afe a ɛto so aduonu+ kosi n’afe a ɛto so aduasa abien+ so no, mfirihyia dumien ni, me ne me nuanom mpo anni aduan a ɛsɛ sɛ wɔde ma amrado no.+ 15 Amradofo a wodii m’anim no de, wɔde nnesoa a emu yɛ duru soaa ɔman no, na wogyee dwetɛ nnwetɛbona aduanan da biara da de tɔɔ aduan ne nsã. Wɔn asomfo nso hyɛɛ ɔman no so.+ Nanso me de, Onyankopɔn a misuro no+ nti, mamfa saa kwan no so.+ 16 Na ɔfasu yi ho adwuma nso misoo mu bi,+ na yɛannye afuw bi;+ m’asomfo nso, wɔn nyinaa boaboaa wɔn ho ano wɔ hɔ maa adwuma no. 17 Me pon so na Yudafo ne asoafo no, mmarima ɔha aduonum, ne wɔn a wofi aman a atwa yɛn ho ahyia mu baa yɛn nkyɛn no didii.+ 18 Da biara na mema wosiesie nantwinini biako, nguan a wɔadɔ asia ne ntakraboa ma me. Na dadu biara nso mema wɔde nsã+ horow nyinaa bi ba pɛnkoro. Na mammisa aduan a ɛsɛ sɛ wɔde ma amrado no, efisɛ adwuma a ɛda ɔman yi so no mu yɛ duru. 19 O me Nyankopɔn,+ nea mayɛ ama ɔman yi nti,+ kae me+ na yɛ me yiye.